“शेयर बजारमा ‘बटम’ लागिसक्यो, नेप्सेले छिट्टै १८०० को आँकडा ‘ब्रेक’ गर्छ !”
Sun, May 31, 2020 at 4:28pm
पूँजी बजार बहस
आईतवार, २२ आषाढ २०७६,	- आर्थिक डेस्क, आहाखबर .	19.64K
बिष्णु प्रसाद बस्याल
शेयर बजार विश्लेषक
नेपालको शेयर बजारमा अहिले केही आशाको किरण देखा पर्दै छ । यसअघि मार्च महिनाको पहिलो सातामा ११०० बिन्दुमा पुगेर नेप्सेले बटम लगाएको हो । त्यस्तै, मई महिनाको अन्तिममा नेप्से १३५० को आँकडालाई छुँदै आफ्नो उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो ।
तसर्थ अहिले समग्रमा हेर्दा बजारको यो नै बुलिश ट्रेण्ड हो । यस तथ्यलाई बुझेर लगानीकर्ता अघि बढ्दा फरक पर्ने अवस्था देखिदैन ।
हाल नेपाली शेयर बजार नेप्से १२५० को बिन्दु वरपर हिडिरहेको अवस्था छ ।
फाइल तस्वीर /आहा खबर डटकम
अहिले भनेको कतिपय लगानीकर्ताले आफ्नो नाफा बुक गरेका कारण बजार केही उतारचढाव देख्न सकिन्छ । जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘रिफ्रेशमेण्ट’ भन्न सकिन्छ ।
जुनसुकै पनि बजारमा लगानीकर्ताले ‘प्रोफिट बुकिंग’ गरेपश्चात केही ‘करेक्शन’ हुनु स्वभाविक नै मानिन्छ । हो त्यही नै भइरहेको छ अहिले नेपालको शेयर बजारमा ।
अहिले भनेको कतिपय लगानीकर्ताले आफ्नो नाफा बुक गरेका कारण बजार केही उतारचढाव देख्न सकिन्छ । जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘रिफ्रेशमेण्ट’ भन्न सकिन्छ । जुनसुकै पनि बजारमा लगानीकर्ताले ‘प्रोफिट बुकिंग’ गरेपश्चात केही ‘करेक्शन’ हुनु स्वभाविक नै मानिन्छ ।
यही अवस्था रहेको खण्डमा नेप्सेले सन् २०१९ सालको अन्तसम्ममा १८०० को आँकडालाई ब्रेक गर्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, सामान्य अवस्था रहेको खण्डमा नेप्से अगामी ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म १८०० अंकको वरिपरि र त्यसपछि केही करेक्शन भएर फेरि माथि चढ्ने संभावना देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा माइक्रोफाइनान्स र इन्सुरेन्स कम्पनीहरुको मुल्य खस्किएको देख्न सकिन्छ । आगामी दिनमा यो क्रम निरन्तर रहने अवस्था देखिन्छ ।
किनभने यिनीहरु पहिले नै ‘ओभर भ्यालूड’ छन् ।
त्यस्तै, हाइड्रोपावरहरुमा लगानी गर्ने विषयमा निकै सचेत हुन आवश्यक छ । किनकि पहिला-पहिला जस्तो अब हाइड्रो सेक्टरमा उति आकर्षण रहेन ।
नाफा कमाउन त्यति सजिलो छैन । गृहकार्य चाहिएन ? बजारमा आफ्नो पैसा लगाउनुपूर्व लगानीकर्ता आफैले पनि कम्पनीको समग्र पर्फमेन्स्का बारे जानकारी राख्नुपर्यो ।
यदी त्यसो गर्न सकिदैन भने कुनै जानकार व्यक्तिलाई गुहानुपर्यो ।
अहिलेको अवस्थामा इन्टरनेटमार्फत कम्पनीको वित्तिय अवस्था बारे बिभिन्न तथ्यांकहरु भेट्न सकिन्छ । त्यस्तै, तालिमका लागि समेत बिभिन्न स्थानहरु खुलिसकेका छन् ।
शेयर बजार रिस्क त हो तर यो पूर्णरुपमा रिस्क नभएर क्यालकुलेटेड रिस्क हो । घट्नु वा बढ्नु पूँजी बजारको विशेषता नै भएकाले त्यसबाट तुरुन्तै अत्तालिन केही आवश्यक छैन ।
शेयर खरीद गर्नुपूर्व इपिएस (अर्निंग पर शेयर) ग्रोथको बारे पनि लगानीकर्ता जानकार रहनुपर्छ । आफूले खरिद गर्न लागेको कम्पनीको भविष्य बुझेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।
त्यस्तै, लगानीकर्तामा स्टक होल्डिंग क्यापासिटी पनि हुनुपर्यो ।
आगामी दिनमा कमर्शियल बैंक, विकास बैंक होटल तथा टे«डिंग कम्पनीका स्टकहरुमा थप आकर्षण बढ्ने निश्चितप्रायः छ । यी बाहेकका अन्य क्षेत्रमा केहीलाई छाडेर त्यति राम्रो पर्फमेन्स् हुने अवस्था देखिदैन ।
शेयर बजार रिस्क त हो तर यो पूर्णरुपमा रिस्क नभएर क्यालकुलेटेड रिस्क हो । घट्नु वा बढ्नु पूँजी बजारको विशेषता नै भएकाले त्यसबाट तुरुन्तै अत्तालिन केही आवश्यक छैन । सावधानीपूर्वक लगानी गर्न जाने बजारबाट कमाउन सकिन्छ ।
(विश्लेषक बस्यालसँगको कुराकानीमा आधारित )